Ihe ụfọdụ na-ewe oge. Nwee ndidi ma nwee nchekwube, ihe ga-aka mma. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ọ na-ekwu na mmiri na-egbutu okwute ọ bụghị n’ihi ike ya, mana n'ihi nnọgide ya. Nke a pụtara na anyị kwesịrị inwe ndidi ma nye m mbọ niile, n'otu oge ahụ, na-emeziwanye onwe anyị site n'otu oge site na oge iji ruo ihe mgbaru ọsọ anyị.
Otu nwere ike iche na “a na m alaghachi azu karịa ndi aka ibe m”, mana n'eziokwu, nke ahụ abụghị ikpe ma ọlị. E wuru anyị maka omume ọma na nke ọjọọ. Onye ọ bụla nwere elekere dị iche, ọnọdụ onye ọ bụla na usoro iheomume zuru oke karịa nke ọzọ, ọ ga-emekwa na ụwa ebe ọnụọgụgụ buru ibu, ọdịnala na asụsụ dị.
Onwere ihe di iche na akuko gbasara ndu onye obula, onye obula bu ihe okacha amara, ozugbo anyi nyere mbo ịghọta ya. Ọ na-ekwu na ihe na-emecha ga-eme nke ọma. Nke a bụ eziokwu bụ na ozugbo ihe daa n'ọnọdụ ziri ezi, anyị nwere ike ime ka ha na-enwuwanye karịa.
Yabụ, ọ dị mkpa ịnye onwe anyị oge, naanị oge bụ akụkụ pụrụ iche dị na mbara ala a nke na-agwọkwa ihe niile dị njọ na-eme. O nwere oke ikike ịgwọ ọrịa. Ọ bụ ihe anwansị mgbe ihe dabara na ọnọdụ n'oge kwesịrị ekwesị, na ọnọdụ dị mma, anyị nwere ike ikwu n'ikpeazụ ụbọchị ahụ ee, anyị mere ya.
Anyị kwesịrị iburu n’uche na ọdịda anaghị adịte aka, ihe ịga nke ọma abụghịkwa nke na-adịgide adịgide. Onye n’iru na –agba mbo ikacha onwe ya ubochi obula ka odi ya nma, nweghim ike, sie ike. Withbawanye site na oge na inwe okwukwe na obi mmadu bu isi ihe di uku.
N'ime ụwa nke ihe na-agbanwe agbanwe, naanị ihe mgbanwe bụ ihe na-adịgide adịgide nke enweghị atụ. Tụkwasịnụ obi na Chineke ma kwere na onwe gị. Thingsfọdụ ihe na-ewe oge iji weghachite onwe anyị gaa na onye nwere ọkaibe ma nwee ọgụgụ isi.
Oge ogwe aka mmadu. Ọ na-anwale gị n’ihu ọha, na-ewetara gị ihere n’ihu ọha, ma na-akwụghachi gị ụgwọ na nzuzo. Site na oge onye furu efu puru igosiputa onwe ya dika onye nwe ubi ya ma me kwa ihe nile di iche iche.
Buru onye nwere ndidi
Quotresị echi ka nma
Quotidi na Ndidi
Ezi echiche na-eche echiche
Kwuru okwu maka inwe ndidi
Nọrọ n’elu Ndidi
Uduak Abasi okpon akan mme ndudue fo. - Amaghi ama
Onye ama ama ama ama ama na ihe omimi mara Albert Einstein kwuru na onye n’enwetaghi…
E nwere ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji nwee ọmarịcha ndụ a. - Amaghi ama
Live na-ebi ndụ naanị otu oge, ya mere, ọ dị mkpa ka ị ghọta uru ọ bụla ...
Dịrị mma na ndụ n'ezie karịa na mgbasa ozi mgbasa ozi. - Amaghi ama
Ọgbọ anyị bụ ọgbọ mgbasa ozi riri ahụ. Ọtụtụ n’ime anyị na-ahọrọ ịhụ ụwa n'anya n'anya karịa…
Thebọchị abụọ kachasị mkpa na ndụ gị bụ ụbọchị amụrụ gị, na ụbọchị ị ga-achọpụta ihe kpatara ya. - Amaghi ama
Webọchị amụrụ anyị bụ ụbọchị nke ga-emeghere anyị ohere na-enweghị atụ. Ọbụghị naanị ohere,…